Ganacsiga: Tartanka shirkadaha sameeya telefoonada caqliga leh “Smartphones” • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Ganacsiga: Tartanka shirkadaha sameeya telefoonada caqliga leh “Smartphones”
Shirkadda Samsung ee samaysa qalabka Korontada ku shaqeeya ee laga lee yahay dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa 4 bilood ee u danbeysey ee sanadkii la soo dhaafey 2012 heshey faa’iido aad u ballaran.
Shirkadda ayaa sheegtey in faa’iidadu kor u kacdey 76 boqolkiiba, waxaana ay gaartey 4.9 bilyan oo lacagta Euro-da ah. oo dhiganta $6.6 billion
Faa’iidada u ballaaran ayaa ka timid Telefonada loo yaqaan Smartphones, ama telefoonada Xarfaanta ah gaar ahaan Samsung Galaxy, kaas oo sanadkii la soo dhaafey loo gatey si wanaagsan.
Shirkadda Samsung ayaa dhaaftey shirkadda weyn ee Apple, waxaana la dhihi karaa suuqa telefoonada Xarfaanta ah Samsung ayaa hoggaamineysa.
Kuwa falanqeeya suuqyada iibka ee telefoonada ayaa sheegaya in Sanadkan 2013 Samsung ay hoggaanka iibka haysan doonto, marka la eego telefoonada raqiiska ah marka loo barbardhigo kuwa shirkadda Apples ee qaaliga ah.
Samsung ayaa lagu wadaa in ay sanadkan 2013 bisha April soo saarto Galaxy-S Serie cusub.
NOKIA oo ku soo laabatey miiska faa’iidada
Shirkadda NOKIA oo muddo dheer hoggaanka u haysey suuqa telefoonada gacanta lagu qaato, ayaa waxaa sanadihii danbe la daaladhacysey khasarooyin is barkadey, isla markaana looga hormarey telefoonada caqliga leh ayaa sanakdan dib ugu soo laabatey Miiska faa’iidada kadib markii shirkaddu 4 bilood ee u danbeysey, ay neef ka soo boodey.
Nokia ayaa samysey faa’ido dhan 439 Milyan oo Euro, taas oo ay kaga soo kabaneyso 954 milyan oo Euro oo khasaaraha oo ay luqunta la gashey sideedii bilood ee hore sanadkii 2012.
Si kastaba ha ahaatee sanadkii la soo dhaafey waxaa NOKIA guud ahaan ay u ahayd mid la mid ah sanadihii hore ee ay sidaan oo kale u khasaartey, inkasta oo afartii bilood ee u danbeysey ay shirkaddu muujisey rajo fiican iyo in ay miiska ku soo laaban karto.
Shirkadda NOKIA oo gacansaar la laeh shirkadda samaysa barnaamijyada Kumbuyuutarada ee Microsoft ayaa waayadan ku dagaalamaysey Telefoonka loo yaqaan LUMIA, noociisa u danbeeyey Lumia 920 ayaa lagu soo waramayaa in si wanaagsan loo gatey, kaas oo kor u soo qaadey shirkadda.
Shirkadda Apple oo faa’ido ku sii socotey
Shirkadda weyn ee Apple ayaa Arbacadii soo bandhigtey xisaab xirkeedi. Sadexdii bilood ee u danbesyey shirkaddu guud ahaan heshey faa’iido wanaagsan, Shirkadda ayaa telefoonada caqliga leh iibisey 48 milyan oo xabbo taas oo ah sanadkii ugu wanaagsanaa ee soo mara, sidoo kale Apple ayaa iibisey 23 Milyan oo xabo oo ah IPAD (taabasho ku shaqeeye), hantida shirkadda soo gashey sanadkii 2012 ayaa gaareysa 54.5 Bilyan oo dollar.
Si kastaba ha ahaatee kuwa maalgashada iyo sicirka saamiyada ayaa hoos u dhacay 10 boqolkiiba waxanaa uu gaarey 460dollar.
Sanadkan ayaa lagu tilmaamaa in uu noqon doono midka ugu daran ee lagu tartamo dhanka teknooljiyada telefoonada iyo weliba Kombuterska taabashada ku shaqeeya.
Cudur-daar: 22 sano ee burburka Soomaaliya wuxuu sababey in luuqaddu hormari weydo isla markaana aan eray bixin loo samayn waxyaabo badan oo ay ugu horeeyaan Teknoolajiyadda casriga ah.